Windows, Web, Mobile Developing နဲ့ပတ်သတ်ပြီးသိချင်တာများ - MYSTERY ZILLION
Windows, Web, Mobile Developing နဲ့ပတ်သတ်ပြီးသိချင်တာများ
June 2012 edited June 2012 in IT Debates
Windows, Web, Mobile Developing တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးမေးချင်တာလေးတွေရှိလို့ပါ။
တစ်ခြား User တွေလည်းကိုယ်သိချင်တာတွေကိုဒီ Post မှာပဲမေးလိုက်လို့ရပါတယ်။
(၁) Crystal Reporting ဆိုတာကဘယ်လို Technique လဲ။ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာသုံးလဲ။
(၂) CMS တွေကိုသုံးထားတဲ့ Site တွေကလုံခြုံမှုရှိလား။ HTML, ASP.Net, JSP တွေနဲ့ရေးထားတဲ့
Site တွေလောက် Security ကောင်းလား။ ပြီးတော့ Business Level တွေမှာရောအသုံးပြုကြလား။
ဘယ်လိုနေရာတွေမှာအများဆုံးအသုံးပြုကြလဲ။ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ CMS တွေကိုထုတ်ထားတာလဲ
(၃) Mobile Developing မှာလည်း Web အပိုင်းတွေပါတယ်ဆိုတော့ Website တွေကို Mobile Suited Site
ပုံစံပြင်တဲ့အခါ HTML, CSS, JS တွေပဲသုံးရတာလား။ သူတို့ရဲ့ SDK တွေနဲ့လုပ်ရတာလား။ Android SDK
က Java Base ဆိုတော့ iOS developing လုပ်ဖို့ ဆိုဘယ် Language အခြေခံရှိဖို့လိုလဲ။ ပြီးတော့
Mobile Developer တွေကို Application developer နဲ့ Web developer ဆိုပြီးထပ်ခွဲထားတာမျိုးရှိလား။
Mobile Level မှာရော Database နဲ့ချိတ်သုံးရတာတွေရှိလား။
(၄) UML, Design Pattern တွေနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Ebooks တွေလိုချင်ပါတယ်။ Course Hightlight တွေမှာ
တွေ့တွေ့နေရတဲ့ System Analysis and Design ဆိုတာအဲဒါတွေကိုပြောတာလား။
(၅) Database Server နဲ့ Web Server တွေအလုပ်လုပ်ပုံကိုတော့သိတယ်။ Windows/Red Hat Server
၁။ crystal report ကို database ကနေ တဆင့် report ကို ပြန်ထုတ်ပြဖို့ သုံးကြပါတယ်။ crystal report ကို သုံးပြုပြီးတော့ report ပြတဲ့အခါမှာ chart တွေ လွယ်လင့်တကူ လုပ်လို့ရပါတယ်။
Crystal Reports for Visual Studio 2005 brings the ability to create interactive, presentation-quality content to the Windows environment. With Crystal Reports for Visual Studio 2005, you can create complex and professional reports inaGUI-based program. Then you can connect your report to almost any database source, as well as to proxy data, such asaresult set (for example, an ADO.NET DataSet). With the wizards included in the GUI designer, you can easily set formatting, grouping, charting, and other criteria.
၂။ CMS ကို အမေရိကန် သမ္မတရုံး website မှာ အစ အသုံးပြုထားပါတယ်။
security ပိုင်းကတော့ ပုံမှန် CMS ကို update လုပ်ပေးရမယ်။ နောက်ပြီး custom addon ရေးရင် ရေးတဲ့ developer နဲ့ ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။
The new york time, CNN , TechCrunch , Mashable စတာတွေက Wordpress ကို သုံးထားပါတယ်။
http://en.wordpress.com/notable-users/ မှာ ဖတ်ကြည့်ပါ။
CMS ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က Content Management System ပါ။ content တွေကို management လုပ်ဖို့ပါ။ စာတွေ ထည့်မယ်။ theme တွေ ပါမယ်။ custom addon တွေကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရေးပြီး ထည့်လို့ရမယ်။
တနည်းပြောရင် flexible ဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားပေးပါတယ်။ အချို့ website တွေကို အစအဆုံးဖန်တီးမယ့် အစား CMS သုံးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားနိုင်တာ အများကြီး ရှိပါတယ်။
ဥပမာ။။ အလုပ်ရှာတဲ့ website တစ်ခု ဖန်တီးချင်ပြီ ဆိုပါဆို့။ ကျွန်တော်ဆိုရင် wordpress ကို သုံးပြု job press addon သုံးလိုက်ရင် ချက်ခြင်း ပြီးသွားပါတယ် ။လိုတာလေးတွေ နည်းနည်းပြင်လိုက်ရင် ၂ ပတ်လောက်နဲ့ ပြီးသွားပါမယ်။
HTML နဲ့ CMS ရေးလို့မရပါဘူး။ HTMLမှာ database တွေကို support မလုပ်နိုင်လို့ပါ။ ASP.NET အတွက် DotNetNuke ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ java အတွက်လည်း ရှိပါတယ်။ http://java-source.net/open-source/content-managment-systems
၃။ Mobile Dev ပါ ၂ ပိုင်း ရှိတယ်။
Web Mobile Dev နဲ့ App Mobile Dev ပါ။
Web Mobile Dev ကတော့ web app ကို mobile screen မှာ မြင်ရအောင် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဥပမာ။ m.facebook.com နဲ့ https://touch.www.linkedin.com လိုမျိုးပေါ့။
iphone , android စတဲ့ screen သေးသေးတွေမှာ အလုပ်လုပ်အောင် ပြန်ဖန်တီးထားပါတယ်။ mobile web ကို ရေးတာကတော့ CSS3 , HTML5ကို အသုံးများပြီး webkit animation ကိုလည်း အသုံးပြုပါတယ်။ webkit ကတော့ လက်ရှိ android , iphone တို့မှာ အသုံးပြုထားတဲ့ browser ပါ။ webkit ရဲ့ CSS မှာ animation အတွက် သီးသန့်ပါတာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ CSS3မှာ webkit animation တွေကို support လုပ်လာပါပြီ။
Native နဲ့ Web ကွာခြားချက်တွေကတော့ hardware ကို ခိုင်းနိုင် မခိုင်းနိုင်ကွာသွားပါတယ်။ web app တွေက phone ထဲက ပုံတွေကို upload လုပ်တာ။ ဓာတ်ပုံရိုက်တာတွေ မရပါဘူး။
Web ရဲ့ အားသာချက်က iOS, Android စတဲ့ cross platform တွေ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
မှာ ကျွန်တော် ရှင်းပြထားဖူးပါတယ်။
Web App မှာကတော့ server က database ကို သုံးပြီး mobile မှာတော့ API ခေါ်သုံးတာနဲ့ sqlite ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
၄။ UML စာအုပ်တွေကတော့ UCSY မှာ သင်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ Ebook တွေကတော့ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း UMLကို ကျောင်းမှာပဲ သင်လာတာဆိုတော့ Ebook တွေ မသိပါဘူး။ Design Pattern ကတော့ သုံးတဲ့ programming language ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကွာသွားပါတယ်။ Design Pattern စာအုပ်ကို ဒီအတိုင်း သွားဖတ်ရင်တော့ နားလည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အတွေ့အကြုံ အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိရှိသွားမှသာ ဖတ်ရင် အရသာ ရှိမှာပါ။ အဲဒီအခါ ငါ ဒါရေးတုန်းက ဒီ design pattern သုံးသင့်တယ်။ ငါသုံးထားတဲ့ ဒီ pattern ပဲဆိုပြီး သဘောပေါက်လာမှာပါ။ ဒီအတိုင်း ဖတ်ရင်တော့ အလွန်ပဲ ပျင်းစရာကောင်းပါတယ်။
၅။ Windows/Red Hat Server ဆိုတာထက် Server လို့ပဲ မှတ်လိုက်ပါ။ Server ကတော့ သုံးတဲ့ နေရာတွေ အများကြီးပါ။ ဥပမာ။။ website အတွက် webserver ။ နောက်ပြီး ကျောင်း network အတွက် server ထောင်ပြီး file sharing အပြင် အခြား အရာတွေ ထိန်းချုပ်ထားတာ။ အရိုးရှင်းဆုံး မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် Internet ဆိုင်တွေမှာ ထောင်ထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင် network server လေးပေါ့။
Windows Server ကတော့ သုံးရတာ အလွယ်ဆုံးပါ။ Network တစ်ခုလုံးကို ထိန်းချုပ်တဲ့အပိုင်းမှာ Windows Server က တော်တော်လွယ်ပါတယ်။ Red Hat Server တွေလည်း အသုံးပြုကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Web Server ကို Ubuntu Server သုံးပါတယ်။ အတော်တော်များများကတော့ CentOS ကို recommend လုပ်ပါတယ်။
အခုလိုအချိန်အကုန်ခံပြီးပြောပြပေးတဲ့အတွက်ကိုစေတန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် CMS ဆိုတာ HTML coding တွေကို Notepad++ မသုံးပဲ Dreamweaver သုံးသလိုသဘောတရားမျိုးပေါ့။ ပြီးတော့ UML တွေ Design Pattern တွေကအလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့ပဲသဘောပေါက်သွားတာမျိုးတွေရှိနိုင်လား။ကျွန်တော်မေးကြည့်ဖူးတာတော့အဲဒါတွေက System Analyst, Architecture လိုရာထူးတွေမှကောင်းကောင်းအသုံးချရတယ်လို့ပြောပါတယ်။
Programmer level ကတည်းက Application တွေကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့တည်ဆောက်နိုင်တာပိုကောင်းမလားလို့။
ဒါဆိုရင်အဲဒိ Web/Database Server တွေဆိုတာ Windows/Linux Server OS တွေ ကိုသုံးပြီးတည်ဆောက်ထားတာတွေပေါ့။
CMS ဆိုတာ notepad++ မသုံးပဲ dreamweaver သုံးတယ်လို့ ပြောမရဘူး။ CMS ဆိုတာက terminal မသုံးပဲ explorer သုံးတယ်ဆိုရင် ပိုနီးစပ်မလားမသိဘူး။
UML တွေ design pattern က အလုပ်လုပ်ရင်း သဘောပေါက်သွားဖို့က ကိုယ်နဲ့ အတူတူ တွဲလုပ်တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပေါ်မူတည်တယ်။ သူက UMLပိုင်းကောင်းရင် ဒါမှမဟုတ် design pattern ပိုင်းကောင်းရင် သူ့ဆီက ပြန်သင်လို့ရတယ်။ အဲသူလည်း မသုံးဘူး ကိုယ်လည်း မတတ်ဘူးဆိုရင်တော့ တတ်သွားစရာ အကြောင်းမရှိပါ။ ဒါတွေကတော့ အလုပ်လုပ်ရင်း စာဖတ်ရင်းလေ့လာသွားရမယ့် အရာတွေပေါ့။
Programmer ၂ ယောက်တည်းနဲ့ project တစ်ခုလုံး ရေးရတာတွေ ရှိတယ်။ UML တွေ design pattern တွေ သိထားရင် ပိုပြီး သက်သာတာပေါ့။ ဘယ် level မှ သုံးရတယ် မရှိပါဘူး။
UML ဆိုတာက app ကို မစခင်မှာ ဘာ class တွေပါတယ်။ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်မလဲဆိုတာကို အကြမ်းလောက် သိသွားအောင်ပါ။ နောက်ပြီးတော့ အခြား တစ်ယောက်ကို လွှဲရင် UML design ကို ကြည့်ပြီး သူဘယ်လိုရေးထားတယ်ဆိုတာကို အနည်းငယ် တီးခေါက်နိုင်ပါတယ်။
Web Server ဆိုတာက Linux OS ပေါ်မှာ apache , nginx စတဲ့ web server service တွေ run နေတာပါ။ Windows မှာဆိုရင် IIS ပေါ့။
Database server ကလည်း Linux OS ပေါ်မှာ mysql , mongodb, redis စတာတွေ အလုပ်လုပ်နိုင်သလို windows ပေါ်မှာလည်း အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
MS SQL database ကတော့ windows မှာပဲ အလုပ်လုပ်တယ်။
Database Server , Web Server တို့ဆိုတာက နားလည်အောင် ပြောရရင်တော့ app ကို service အနေနဲ့ run ထားတာပေါ့။ background မှာ တောက်လျှောက် အလုပ်လုပ်ပေးနေတာလို့ ဆိုရမယ်။
Windows Server , Linux Server တို့ဆိုတာကတော့ OS level server တွေပါ။ Network Management ပိုင်းတွေ ပါပါတယ်။
Database Server , Web Server တွေက Desktop windows နဲ့ Linux မှာလည်း အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်စိတ်ထဲမရှင်းမလင်းဖြစ်နေတာတွေတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုစေတန်။
> (၂) CMS တွေကိုသုံးထားတဲ့ Site တွေကလုံခြုံမှုရှိလား။
CMS ဆိုက်တွေရဲ့ ပြဿနာက အမြဲ update လုပ်ရပါတယ်၊ မဟုတ်ရင် known vulnerability တွေကို ချောင်းနေတဲ့ crawler တွေရှိပါတယ်။ ကျအနော်အမြင်ကတော့ ဖြစ်နိူင်ရင် CMS မသုံးသင့်ပါဘူး။
> ASP.Net, JSP တွေနဲ့ရေးထားတဲ့ Site တွေလောက် Security ကောင်းလား။
သေချာပေါက် ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအတွက်ပေးလိုက်ရတာတွေ (server cost, lock-in environment) နဲ့ တွက်ကြည့်ရင် သိပ်မကိုက်ဘူး။
> ပြီးတော့ Business Level တွေမှာရောအသုံးပြုကြလား။
အသုံး လွင်နေတယ် လို့မြင်ပါတယ်။
> ဘယ်လိုနေရာတွေမှာအများဆုံးအသုံးပြုကြလဲ။ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ CMS တွေကိုထုတ်ထားတာလဲ
> Mobile Developing မှာလည်း Web အပိုင်းတွေပါတယ်ဆိုတော့ Website တွေကို Mobile Suited Site
ပုံစံပြင်တဲ့အခါ HTML, CSS, JS တွေပဲသုံးရတာလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ target browser specific CSS (-webkit-) သုံးတာက လွဲရင် almost standard HTML5 ပါပဲ။ HTML header မှာတော့ viewport meta ထဲ့ရပါတယ်။ ဥပမာ iphone အတွက်ဆို
> သူတို့ရဲ့ SDK တွေနဲ့လုပ်ရတာလား။
web app မှာ သုံးလို့မရပါဘူး။